Baby – Page2– Healthy Life Journal
ပန်းပွင့်လေးလို အမြဲလန်းဆန်းနေပါစေ ကလေးငယ် . . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကလေးငယ်တွေက ပန်းလေးတွေနဲ့ တူပါတယ်။ သူတို့တွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ လန်းစွင့်နေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းပေမယ့် ဝေဒနာတစ်စုံတစ်ရာ ခံစားရချိန်မှာ ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေလို သနားကရုဏာသက်စရာပါ။ ကလေးတွေ ဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ စိုးရိမ်ပူပင်မှုကင်းကင်းနဲ့...
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊——— ကျောင်းကျန်းမာရေး ပညာပေးဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ကလေးသူငယ် စိတ်ကျရောဂါအကြောင်းကို စာရေးသူ တင်ပြဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ “ကလေးဆိုတာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်သွားလာတတ်တဲ့ အရွယ်ပါ။ ကလေးသူငယ် စိတ်ကျရောဂါ ခံစားရတာ ရှိလို့လား”လို့ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်က မေးမြန်းပါတယ်။ “ရှိတတ်ပါတယ်။ သတိမထားမိလို့...
ကလေးတွေကို ရေဘယ်လောက်ပမာဏ တိုက်သင့်ပါသလဲ . . .
———၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊——— Q. ကလေးတွေကို ရေတိုက်တဲ့အခါ စနစ်တကျ တိုက်သင့်တဲ့ ပမာဏကို သိချင်ပါတယ် ဆရာမ။ A. မိခင်နို့ချိုတစ်မျိုးတည်းကို ၆ လအထိတိုက်ရင် ရေတိုက်စရာမလိုသေးပါဘူး။ ရေတိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကတော့ – •...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အိမ်နီးနားချင်းမိတ်ဆွေရဲ ့သမီး မစ်အေမီက မူကြိုကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ စကားစပ်မိလို့ မစ်အေက မေးမြန်းပါတယ်။ “မူကြိုကျောင်းသားအရွယ် ကလေးတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ချို့ယွင်းတာရှိ၊မရှိ ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ” “အေမီတို့ မူကြိုကျောင်းဆရာသင်တန်းမှာ သင်ကြားခဲ့ရဖူးတဲ့...
ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်မှာ တက်သင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိသင့်ပါသလဲ။ A. ကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားနှုန်းက တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မတူပါဘူး။ ကလေးမွေးတုန်းက ကိုယ်အလေးချိန် ၅ ပေါင်ဆိုရင် တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ ၁၅ ပေါင်...
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ရင်တောင် တစ်ခါတလေ ခံတွင်းနံ့နံတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ခံတွင်းနံ့နံရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့- ခံတွင်းခြောက်ခြင်း ကလေးနှာခေါင်းပိတ်နေလို့ ပါးစပ်ကနေ အသက်ရှူနေရရင် ခံတွင်းခြောက်ပြီး ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေက ပိုမိုပြန့်ပွားနိုင်ခြေ များပါတယ်။ ပြင်ပပစ္စည်းဝင်ခြင်း ကလေးဟာ သူ့နှာခေါင်းထဲကို...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးတွေ အဝလွန်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုစားသောက်နည်းစနစ်နဲ့ ဝိတ်လျှော့ခိုင်းသင့်ပါသလဲရှင့်။ A. တချို ့ကလေးတွေက စားတာများသွားတဲ့အတွက် အဝလွန်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် အဝလွန်တယ်၊ မလွန်ဘူး၊ ပုံမှန်ဆိုတာကို သိဖို့ဆိုရင်...